I-Semalt Expert: Indlela yokuMisa ukuLawulwa koGawulayo okwenzeka kwiGoogle Analytics
Ukuqinisekisa ukuba enye iGoogle Analytics yenziwe yindlela kuphela yokuqinisekisa ukubaUmkhankaso wokuthengisa owenzelwa ishishini okanye umntu osebenzayo kwaye i-website isebenza njengoko kulindeleke. Nangona kunjalo, kule nkquboyokuphucula i-Google Analytics, kukho iinkalo ezithile eziqinisekisiweyo zokuchaphazela ukusebenza kwee-analytics. Ukudluliselwa kogaxekile kuyinkathazo kuninziabathengisi.
Igor Gamanenko, i Semalt Umphathi weNtuthuko yomThengi, ungathanda ukugxila ingqwalasela yakho yokuthumela ugaxekile ngezobuchwepheshelwenzeka ngeendlela ezimbini: abahlaseli bewebhu be-spam, kunye negosa lokuthutha:
I-spam web-crawlers. Uninzi lweenkqubo ezizenzekelayo ezibonisa iwebhusayithi ngendlela efanayoiGoogle. Abanye abanjengoGooglebot benza ukuba baziwa kwabo kwaye ngenxa yoko banqatshelwe kwiingxelo ze-analytics - купить маршрутизатор. Ezinye ezingabangeliizinga lokuhlawula i-100%
Ukudluliselwa koMoya. Ezi zinto zithumela izicelo ze-HTTP ezikhohlisayo ezinokukwaziukudala ukuthunyelwa kogaxekile. Badibanisa kunye neendlela ezisemthethweni kodwa abayikuvakashela iwebhsayithi kodwa babale kwingxelo yokugqibela.
Abantu bangadala ukuthunyelwa kogaxekile kwiwebhusayithi ngezizathu ezininzi. Kungenzeka kube ngenjongookanye engenziyo. Esinye sezizathu zokubangela ukuba i-spam referrals ibonakale kwiwebhusayithi ngenxa yeenkqubo ezilambela. Abanye abahluleki bayakwazi ukugqibaikhowudi kwi-bot, kwinqanaba lokuba abahluleki ukuzichonga ngokufanelekileyo. Abanye abaphuculisi abanqwenela ukuba ne-bots yaboikhutshwe ziiprothothi zeGoogle..Ngako oko, ngokuziguqula njengendlela yebhanti esemthethweni, bafikelela kwisiza ngaphandlepha zamisa. Abanye abaphuhlisi abanokuzikhethela bakhetha ukusebenzisa i-spam referrals ukuze bafikelele kwinqwenela yabasebenzisi kwaye bafake i-malware kwiikhomputha zabo.Ekubeni ezi zixhumanisi zikhangeleka ngokwenene kubasebenzisi, azifumani isizathu sokubabaza.
Ngokona nxalenye, ukuhanjiswa kogaxekile kukuphazamisa idatha esetyenziswa yi-Google Analytics,ngaloo ndlela ebonisa ingxelo. Ukuba khona kwabo kuthetha ukulawula ixesha lokucoca iiseshini zogaxekile, apho abathengisi abanokuchitha imaliukwenza ezinye iinjongo zokuvelisa kwisayithi. Ngaphandle kokungazi ukuba isayithi ngokwenene ihlala ekubhekiselele kwi-spam yokuhanjiswa, omnye unokuphelisaizigqibo ezinokuchaphazela ukulungiswa kwe-SEO kunye nokusekwa.
Ukukhusela ukukhutshwa kogaxekile
Xa umntu echaza ingxaki ekhoyo evela kwi-Google Analyticsiingxelo zayo, banokuzama ukuluhluza kumanani. Nangona kunjalo, oku akusiqinisekiso sokuthi le mimandla ayiyi kubuya.
Kuyinto emangalisayo ukuyenza oku ukuba bajolise ekususeni okungafunekiyozithuthi. Iingxaki ezichaphazela iwebhusayithi, xa kuziwa kwiindawo zokudluliselwa kogaxekile, zikho kwifayile ye ".htaccess". Abaninzi beeblogi banokuthabathaukuba abantu bangasebenzisa iifayile ngokwabo ukuba basuse i-traffic engafunekiyo. Nangona kunjalo, ifayile yezobugcisa kwaye iqulethe kakhuluezininzi izilungiso zesizinda kunye nezilungiso. Ngoko ke, ukwenza impazamo elula ngaphandle kokucaca koko kufuneka uyenze, inokulimazampe mbelelo kwiwebhusayithi. Kuqikelele ukuba ngabaphuhlisi abanamava baphathe ifayile ngokukhuselekileyo.
Ifayile ye -htaccess inokubamba bonke abaqhawulayo, kwaye icacise imbali yabo kwisayithi.Nangona kunjalo, ukuthunyelwa kwenyama kungadinga umgudu ongakumbi. Icandelo eliphambili kwiGoogle Analytics livela apha, xa uzama ukukhulaezimbi kakhulu ezi zihanjisiweyo.